05:47:39 pm 18-May-2019
भरतपुरमा बनाउन लागेको गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका लागि पाँच करोड रकम संकलन
चितवन–धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) ले चितवनमा पत्रकार सम्मेलन गरी अहिलेसम्म साढे ५ करोडभन्दा बढी रकम संकलन भइसकेको जानकारी गराए । कट्टेलका अनुसार विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरिएको अभियान र व्यक्तिबाट अहिलेसम्म पाँच करोड ५० लाखभन्दा बढी रुपैँया संकलन भइसकेको छ ।
यो रकम संकलनको सुरूवात भएको भन्दै उनले आफूहरूले सुरुवाती चरणमा अपेक्षा गरे जति रकम संकलन भएको दाबी गरे । परियोजना के हो ? कस्तो हो ? भनेर बुझाउन बाँकी नै छ त्यसपछि आर्थिक संकलनले तिव्रता पाउँछ,’ उनले भने ।
जनस्तरबाट निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्न करिब तीन अर्ब लाग्ने अनुमान छ । अझै दुई अर्ब ९४ करोड ५० लाख रुपैँया अपुग छ, जुन रकम विभिन्न संघ संस्था, व्यक्ति तथा सहयोगी दाताहरुबाटै जुटाउनेछौ, फाउण्डेसनका अध्यक्ष धुर्मुसले भने । फाउण्डेसनका अध्यक्ष कट्टेलले राष्ट्रकै गौरव बढाउने काममा दिल खोलेर सहयोग गर्न सबै नेपालीलाई आग्रह गरे ।
रकम संकलनका लागि केही समयअघि मलेसिया लगायत विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको भन्दै अध्यक्ष कट्टेलले अब चाँडै विभिन्न देशमा जाने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए । उनले सहयोग आएको रकम पारदर्शीरूपमा परिचालन हुने भएकाले अनियमितता नहुने पनि प्रष्ट पारे ।